Degso Minibus Simulator 2017 APK loogu talagalay Android
Degso Minibus Simulator 2017
Degso Minibus Simulator 2017,
Minibus Simulator 2017 waa ciyaar bas yar oo laga yaabo inaad jeceshahay haddii aad rabto inaad la kulanto khibrad wadisnimo oo macquul ah aaladahaaga mobilada.
Waxaan isku dayeynaa inaan lacag ku helno annagoo adeegsanayna xirfadahayaga wadista ee Minibus Simulator 2017, oo ah ciyaar minibus ah oo aad ka soo dejisan karto oo aad bilaash ugu ciyaari karto taleefannadaada casriga ah iyo kiniiniyada adoo adeegsanaya nidaamka hawlgalka Android. Waxaan ku bedeleynaa darawal bas yar ciyaarta dhexdeeda, waxa aan u baahanahay inaan sameyno inta aan ku wadno magaalada waa inaan soo booqannaa meelaha istaagga oo aan ka soo qaadno rakaabka gaarigayaga oo aan u qaadno rakaabkan meesha ay rabaan inay ku yimaadaan waqtiga loo cayimay.
Waxaan ku dhex wadnaa taraafikada magaalada Minibus Simulator 2017. Maaddaama aan la tartameyno waqtiga, waa inaan dhinac ka orodno oo aan fiiro gaar ah u yeelano taraafikada dhinaca kale. Waxaan kasban karnaa lacag haddii aan ku ridno rakaabka joogsiga meesha ay ka soo degi doonaan waqtigii loogu talagalay. Minibus Simulator 2017, waxaan ku furi karnaa basas kala duwan lacagta aan helno.
Waxaa jira 13 nooc oo basaska yaryar ah oo ku yaal Minibus Simulator 2017. Ciyaarta dhexdeeda, waxaan ku wadi karnaa wareegga maalin iyo habeen, oo waxaan ka bixi karnaa magaalada.
Minibus Simulator 2017 Noocyada